सगुनमा दोस्रो चरणको लगानी गर्ने समय सीमा नोभेम्वर ३० सम्म - Living with ICT
Home / Featured / सगुनमा दोस्रो चरणको लगानी गर्ने समय सीमा नोभेम्वर ३० सम्म
Admin Oct 12, 2017	Leaveacomment
वासिङ्टन डीसी, अक्टोवर ११, २०१७ – सोसल कमर्स सञ्जाल सगुन (www.sagoon.com) ले हालै खुल्ला गरेको लगानी अवसरलाई नोभेम्वर ३०, २०१७ मा स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सगुनले डिसेम्वरको दोस्रो हप्तासम्म बहुप्रतीक्षित मोबाइल एप पनि सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
प्रति शेयर २३ अमेरिकी डलरमा सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने ग श्रेणीको सामान्य शेयरका लागि यस चरणमा न्युनतम १ हजार अमेरिकी डलरको शेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। यस चरणमा सगुनले लगानी गरिने रकम क्रेडिट/डेविट कार्ड, एसीएच्, बैंक तथा चेकमार्फत् भुक्तानीबाट स्वीकार गरेको छ। सगुनले आफ्नै वेबसाइटबाट शेयर जारी गरेको छ जहाँ लगानीको बारेमा आवश्यक पर्ने जानकारी पढ्न तथा डाउनलोड गर्नको लागि उपलब्ध समेत उपलव्ध छ ।
संसारभरका २ हजार भन्दा बढी व्यक्तिले गरे सगुनमा लगानी
सगुनमा संसारभरबाट लगानीकर्ताले लगानी गरेका छन्। तीमध्ये अधिकांश अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत तथा मध्यपूर्वका रहेका छन् । यसमा रहेका शेयरधनीहरुमध्ये अधिकांश यसका प्रयोगकर्ता र समर्थक रहेका छन्। थप व्यक्तिहरु दैनिक रुपमा यससँग जोडिने क्रम जारी रहेको छ। पहिलो चरणमा ३ हजार भन्दा बढीले लगानी गर्न चाहे पनि फर्म भरेर बैकसम्म पुगेर बैक मार्फत वायर टान्फर गर्नु पर्ने झन्झटका कारण लगानी गर्न छुटेका थिए । यस चरणमा क्रेडिट/ डेविट कार्ड मार्फत समेत लगानी गर्न सकिने भएपछि कारण लगानी कर्तालाई सहज हुने अनुमान सगुनले गरेको छ । पहिलो चरणमा लगानि गर्न छुटेकाहरुले पनि पनि यस चरणमा लगानी गर्न सक्ने बताइएको छ।
सगुनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गिरीले भन्नुभयो, “ बिश्वभर रहेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका कतिपय समस्याहरुको समाधान गर्न र प्रयोगकर्ताका आवश्यकतालाई ध्यान दिने कम्पनीको रुपमा आफूलाई विकास गर्न लागिपरेका छौ ।”
गिरीले थप्नुभयो, ” हाम्रा शेयरधनीहरुको मूल्यलाई दीर्घकालीन रुपमा बढाउन लागिपरेका छौं। यसका लागि अझै केहि समय लिन्छ । गत आठ महिना हाम्रो उत्साहका महिनाहरु भए । हामीले भारतमा यस क्षेत्रका एकदमै प्रतिभावान कर्मचारीहरुलाई नियुक्त गरेका छौं । हामीले पृष्ठभूमिमा काम गर्ने प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरेका छौं जसले लाखौं प्रयोगकर्ताहरुको वेब ट्राफिक, किनबेच तथा अन्य सेवालाई सहजै धान्न सक्छ ।”
“हामीले भाडामा लिएको कार्यालयको क्षेत्रफललाई ७ हजार वर्गफिटबाट २७ हजार वर्गफिटमा पुर्याएका छौं ” गिरीले भने ” यी सबै हासिल गर्नको लागि दीगो तथा निरन्तर लगानीको आवश्यकता पर्दछ । हामीले तय गरेको न्युनतम लगानीको रकम हासिल हुने चरणमा पुगेकोले हामीले लगानी उठाउने कामको स्थगनको घोषणा गरेका छौं । कनेक्ट. शेयर. अर्नको हाम्रो दूरदृष्टिलाई साकार पार्नलाई हामीलाई साथ दिन अनुरोध गर्दछौं । ”
Previous एनसेलबाट आइफिल्क्समा पहुच, ग्राहकलाई असिमित डेटा
Next नेपालको खल्तीले जित्यो गुगल बिजनेश ग्रुप स्टोरी कन्टेस्ट